May 5, 2022 - Achawlaymyar
အရေးကြီးလို့ သူမရဲ့ဆွဲကြိုးရောင်းပြီးပိုက်ဆံရှာလိုက်တဲ့ နုဂျီ ဝန်ကြီး
May 5, 2022 by Achawlaymyar
“ကဲ……. အရေးကြီးလို့ ပိုက်ဆံရှာဦးမယ်” UG တွေ အတွက် ကျမရဲ့ ဆွဲကြိုးလေးကို ကံစမ်းမဲရောင်းချင်ပါတယ်။ တစ်စောင် ကို မြန်မာငွေ နှစ်သောင်း အားလုံးဝယ်နိုင်မဲ့စျေးနဲ့ လုပ် ထားပါတယ်။ ရန်ကုန် အော်ပရေးရှင်းအသစ်တခု အတွက် သိန်း (၁၀၀) မှန်းထားလို့ ဝယ်ကူကြပါဦး။ သိန်း (၁၀၀) ထက် ကျော်ရရင်လည်း ပျော်တာပေါ့ နော် ❤️❤️ အားစိုက်ပေးကြပါဦး ချစ်သောသူတို့ရေ…. ထောက်ပံ့ဝယ်ယူလိုပါက m.me/soldiercatmm သို့ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်။ (အပေါ်က link အပြာရောင်ကလေး ကိုနှိပ်ပြီး သွားရုံပါပဲ) မြန်မာ ဆိုရင် kpay, wavepay ၊ နိုင်ငံခြား ဆိုရင် US, UK , ထိုင်း , စင်ကာပူ, ကိုရီးယား , … Read more
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံးချန်ပီယံဆုကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာဘောလုံးကစားသမားတဦးဖြစ်သူ တိုက်စစ်မှူး အောင်သူ
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံးချန်ပီယံဆုကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာဘောလုံးကစားသမားတဦးဖြစ်သူ တိုက်စစ်မှူး အောင်သူ… ပရိသတ်ကြီးရေမြန်မာ့လက်ရွေးစင်ဘောလုံးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အောင်သူကတော့ တစ်ချိန်ကမြန်မာအသင်းကိုအောင်ပွဲတွေရရှိနိုင်အောင် စွမ်းစွမ်းတမံမံကြိုးစားပေးခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာအောင်သူက ထိုင်းထိပ်သီးကလပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဘူရီရမ်အသင်းနဲ့ စာချုပ်ချုပ်ထားပြီးဂိုးတွေသွင်းကာအကောင်းဆုံးကစားပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့တိုက်စစ်မှုးအောင်သူက ဘူရီရမ်အသင်းနဲ့အတူ ၂၀၂၁-၂၂ ဘောလုံးရာသီ ထိုင်းလိဂ်-၁ အမှတ်ပေးချန်ပီယံဆုဖလား ရယူနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အောင်သူသည်ထိုင်းလိဂ်-၁ ဆုဖလားကိုပထမဆုံးရယူနိုင်သည့်မြန်မာဘောလုံးသမားအဖြစ်လည်းမှတ်တမ်းဝင်နိုင်ခဲ့သည်။ crd zawgyi ပရိသတ်ကြီးရေမြန်မာ့လက်ရွေးစင်ဘောလုံးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အောင်သူကတော့ တစ်ချိန်ကမြန်မာအသင်းကိုအောင်ပွဲတွေရရှိနိုင်အောင်စွမ်းစွမ်းတမံမံကြိုးစားပေးခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာအောင်သူက ထိုင်းထိပ်သီးကလပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဘူရီရမ်အသင်းနဲ့ စာချုပ်ချုပ်ထားပြီးဂိုးတွေသွင်းကာအကောင်းဆုံးကစားပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့တိုက်စစ်မှုးအောင်သူက ဘူရီရမ်အသင်းနဲ့အတူ ၂၀၂၁-၂၂ ဘောလုံးရာသီ ထိုင်းလိဂ်-၁ အမှတ်ပေးချန်ပီယံဆုဖလား ရယူနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အောင်သူသည်ထိုင်းလိဂ်-၁ ဆုဖလားကိုပထမဆုံးရယူနိုင်သည့်မြန်မာဘောလုံးသမားအဖြစ်လည်းမှတ်တမ်းဝင်နိုင်ခဲ့သည်။ crd ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံးချန်ပီယံဆုကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာဘောလုံးကစားသမားတဦးဖြစ်သူ တိုက်စစ်မှူး အောင်သူ… ပရိသတ်ကြီးရေမြန်မာ့လက်ရွေးစင်ဘောလုံးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အောင်သူကတော့ တစ်ချိန်ကမြန်မာအသင်းကိုအောင်ပွဲတွေရရှိနိုင်အောင် စွမ်းစွမ်းတမံမံကြိုးစားပေးခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာအောင်သူက ထိုင်းထိပ်သီးကလပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဘူရီရမ်အသင်းနဲ့ စာချုပ်ချုပ်ထားပြီးဂိုးတွေသွင်းကာအကောင်းဆုံးကစားပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့တိုက်စစ်မှုးအောင်သူက … Read more
အသက္၉ႏွစ္အ႐ြယ္သာရွိေသးသည့္သမီးေလးက ေက်ာင္းထြက္ခ်င္ၿပီဟုဆိုေသာအခါ ေရကန္ႀကီးထဲမွာၾကာစြယ္ေတြကိုခူးခိုင္းၿပီး ဘဝ၏ပင္ပန္းခက္ခဲမႈေတြကို လက္ေတြ႕သင္ေပးခဲ့သည့္ဖခင္ မိဘတိုင္းသည္သားသမီးေလးတို႔ကိုပူပန္ဆင္းရဲမႈမရွိေစဘဲစိတ္ခ်မ္းသာစြာျဖင့္ဘဝကိုအဆင္ေျပေျပျဖတ္သန္းေစလိုၾကေပသည္။ထို႔ေၾကာင့္လည္းေငြေၾကးႏွင့္အခ်ိန္မ်ားစြာကိုအကုန္အက်ခံၿပီးသားသမီးေလးတို႔ကိုစာေပသင္ၾကားေစခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းသားသမီးအခ်ိဳ႕သည္စာေပ၏တန္ဖိုးကိုနားမလည္ဘဲေဆာ့ကစားရန္အတြက္သာေတြးေတာေနခဲ့သည္။ယခုတြင္လည္းအသက္၉ႏွစ္အ႐ြယ္သမီးေလးက ေက်ာင္းမတတ္ခ်င္ေတာ့ေၾကာင္းေျပာလာသည့္အတြက္ဖခင္ျဖစ္သူဟာအနည္းငယ္စိတ္ထိခိုက္သြားခဲ့ရပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ဖခင္ျဖစ္သူဟာ မိသားစုတစ္ခုလုံးအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳေနသည့္ ေရကန္က်ယ္ႀကီးထဲမွၾကာစြယ္မ်ားခူးယူေနသည့္အလုပ္ကို သမီးေလးအားလက္ေတြ႕လုပ္ခိုင္းၿပီး ဘဝ၏ခက္ခဲမႈေတြကိုျပသကာ ေက်ာင္းတတ္ခ်င္ေအာင္သင္ခန္းစာေပးခဲ့ပါတယ္။ Shoon (Cele Daily) Unicode အသက်၉နှစ်အရွယ်သာရှိသေးသည့်သမီးလေးက ကျောင်းထွက်ချင်ပြီဟုဆိုသောအခါ ရေကန်ကြီးထဲမှာကြာစွယ်တွေကိုခူးခိုင်းပြီး ဘဝ၏ပင်ပန်းခက်ခဲမှုတွေကို လက်တွေ့သင်ပေးခဲ့သည့်ဖခင် မိဘတိုင်းသည်သားသမီးလေးတို့ကိုပူပန်ဆင်းရဲမှုမရှိစေဘဲစိတ်ချမ်းသာစွာဖြင့်ဘဝကိုအဆင်ပြေပြေဖြတ်သန်းစေလိုကြပေသည်။ထို့ကြောင့်လည်းငွေကြေးနှင့်အချိန်များစွာကိုအကုန်အကျခံပြီးသားသမီးလေးတို့ကိုစာပေသင်ကြားစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်းသားသမီးအချို့သည်စာပေ၏တန်ဖိုးကိုနားမလည်ဘဲဆော့ကစားရန်အတွက်သာတွေးတောနေခဲ့သည်။ယခုတွင်လည်းအသက်၉နှစ်အရွယ်သမီးလေးက ကျောင်းမတတ်ချင်တော့ကြောင်းပြောလာသည့်အတွက်ဖခင်ဖြစ်သူဟာအနည်းငယ်စိတ်ထိခိုက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ဖခင်ဖြစ်သူဟာ မိသားစုတစ်ခုလုံးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေသည့် ရေကန်ကျယ်ကြီးထဲမှကြာစွယ်များခူးယူနေသည့်အလုပ်ကို သမီးလေးအားလက်တွေ့လုပ်ခိုင်းပြီး ဘဝ၏ခက်ခဲမှုတွေကိုပြသကာ ကျောင်းတတ်ချင်အောင်သင်ခန်းစာပေးခဲ့ပါတယ်။ Shoon (Cele Daily)
ထန်းရည် အကြောင်း သိကောင်းစရာ… (ထန်းဋီကာ)
ထန္းရည္ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ… (ထန္းဋီကာ) ပင္က်ေရ ဆိုတာ ထန္းပင္က ခ်စဆို ခ်ိဳ တာႀကီးပဲ။ အလ်င္(အနယ္) ေလးထည့္လိုက္မွ ကေဇာ္ေပါက္ၿပီး မူးတာ။ တခ်ိဳ့က ထန္းမတက္ခင္ ထန္းေရခံမယ့္ ျမဴအိုး ဒါမွမဟုတ္ ဝါးက်ည္မွာ တခါတည္း အလ်င္ကို ထည့္လိုက္တယ္။ တခ်ိဳ့က ေအာက္ေရာက္မွ အလ်င္ထည့္တယ္။အလ်င္ဆိုတာ ထန္းေရအနည္အႏွစ္ကိုေျပာတာ။ ထန္းေရခံတာမ်ားလာရင္ ေအာက္ေျခမွာ အနည္ေတြစုလာၿပီး အဲ့အနည္ကို သိမ္းထားလိုက္တယ္။ ထန္းေရခ်ိဳထဲကို အလ်င္နည္းနည္းေလးထည့္လိုက္ၿပီး အခ်ိန္တစ္ခုေရာက္ရင္ ထန္းေရ ကခ်ဥ္ခါးလာတာ။ ၾကာေလ ျပင္းလာေလေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ေနေက်ာ္ ထန္းေရ က ျပင္းတာ။ တခ်ိဳ့က ထန္းအလ်င္ကို ေနပူလွန္း ထားတယ္။ မိုးတြင္းလို ထန္းေရခံ လို့မရရင္ ထန္းအလ်င္ကို ေရေႏြးထဲ ထည့္ေဖ်ာ္ေသာက္တယ္တဲ့။ အာသာေျပေပါ့။ … Read more
ငွေတွေဝင်လာမဆဲတဲ့ “လှိမ့်ဝင် တည်သုံး အိုးနှစ်လုံး ” အဆောင်အကြောင်း နှင့် အသုံးပြုနည်း
ငွေတွေဝင်လာမဆဲတဲ့ “လှိမ့်ဝင် တည်သုံး အိုးနှစ်လုံး ” အဆောင်အကြောင်း နှင့် အသုံးပြုနည်း ငွေတွေဝင်လာမဆဲတဲ့ “လှိမ့်ဝင် တည်သုံး အိုးနှစ်လုံး ” အဆောင်အကြောင်း နှင့် အသုံးပြုနည်း တစ်နိုင်ငံလုံးစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ လှိမ့်ဝင်တည်သုံးယတြာကကျွန်တော်စခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းပါ။အဖြစ်က ဒီလိုပါ။မိတ်ဆွေတစ်ယောက်နဲ့ ၂နှစ်ခွဲနေမှ ပြန်တွေ့တော့သူ့မိသားစုကတော်တော်လေးအဆင်ပြေနေပြီး အရင်ထရံအိမ်လေးနေရာမှာအာစီတစ်ထပ်တိုက်ကြီးနဲ့ပေါ့အရမ်းကိုအဆင်ပြေပြီးနောက်ထပ်တိုက်တစ်လုံးတောင် ဆောက်နေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ သူ့လုပ်ငန်းက တအားလှိမ့်ဝင်သွားတာကို..အဲ့ သူ့အိမ်ရှေ့အဝင်ဝမှာလှိမ့်ဝင်စဉ့်အရုပ်လေးကိုအိမ်ဘက်လှိမ့်ဝင်နေတဲ့ပုံချိတ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ အိမ်ဧည့်ခန်းမှာတော့စဉ့်အိုးလေးတည်နေတဲ့ပုံကိုတင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။မေးကြည့်တော့ လှိမ့် ဝင် တည် သုံးလေတဲ့။စီးပွားဖြစ်တယ်လုပ်ငန်းကောင်းတယ်တဲ့ဗျာ..ကျွန်တော်တို့ မြို့မှာထမင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိတယ်။အရမ်းကိုရောင်းရတယ်။အလှူပေးနေသလိုကိုရောင်းရတာ သူတို့အိမ်မှာလည်း အိမ်ရှေ့သံတံခါးအုတ်ခုံမှာအဲဒီလှိမ့်ဝင်အရုပ်လေးအိမ်ဘက်ကိုလှိမ့်ဝင်နေတဲ့ ပုံလေး တင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။သူ့ထမင်းဆိုင်ကတော့လူတွေလှိမ့်ဝင်နေတော့တာပါပဲဗျာ..အဲဒါနဲ့လူမဝင်လုပ်ငန်းမကောင်းတဲ့သူနဲ့အကြွေးတင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတစ်ယောက်နှစ်ယောက်ကိုအဲဒီအရုပ်လေးနှစ်ခုကိုထားဖို့ပြောလိုက်တာ သူတို့လည်း ကျောက်ဆည်တပေါင်းပွဲနဲ့ကြုံတော့စဉ့်ကူးက စဉ်အိုးသည်တွေလာတာနဲ့အဲဒီအရုပ်လေးကိုတစ်ရုပ်ကိုအိမ်ရှေမှာထားပြီးတစ်ရုပ်ကို အိမ်ထဲမှာထားဖို့ ပြောလိုက်တာအဲဒီ ၃ယောက်ဟာ ၆လအတွင်းလုံးဝမဆပ်နိုင်တော့ဘူးလို့ထင်ထားတဲ့အကြွေးတွေ ကြေပြီးအဆင်ပြေသူတွေဖြစ်နေပါပြီဗျာ။ ”လှိမ့်ဝင် တည်သုံး” စဉ့်အိုးလေးတွေ ဘယ်လိုဓာတ်ဆင်ရတာပါလဲ” အဲဒီလှိမ့်ဝင်တည်သုံးအရုပ်လေးတွေကဟို အရင်လောကီပညာရှင်(ဆန်းပညာရှင်)တွေလုပ်သွားခဲ့တာပါ ။ပညှပ်သွားရာဓါတ်သက်ပါဆိုသလိုလူအများသုံးစကားလှိမ့်ဝင်ဆိုတာကိုယူပြီးလှိမ့်ဝင်နေတဲ့ အရုပ်ကလေးတွေကိုစီရင်ပေးသွားတာပါ။ အဲဒီမှာစဉ့်အိုးလေးကိုလှိမ့်ဝင်နေတဲ့ကောင်လေး( ၂ … Read more
အမျိုးသမီးများ ဓမ္မတာလာနေချိန် မိသားစုနဲ့ခွဲကာ နွားတဲနှင့် ယာယီတဲထိုးပြီး …See more. …
ကမ္ဘာကြီးသည် နိုင်ငံပေါင်းစုံနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပြီး နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတိုင်းစီမှာလည်း ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံသည် မတူညီပဲ အမျိုးမျိုးရှိတတ်ကြသည်။ ယခုတွင်လည်း နီပေါနိုင်ငံရှိ Kalekandaရွာတွင် နေထိုင်သော အမျိုးသမီးများသည် ဓမ္မတာလာနေချိန်အတွင်း အိမ်ရှိအသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများကို တစ်ခုမှ ကိုင်တွယ်ခွင့်မရှိသည့်အပြင် မိသားစုနဲ့လည်း အတူနေထိုင်ခွင့်မရှိပေ။ သူတို့ရွာရဲ့ ဓလေ့ထုံးစံအရ အမျိုးသမီးများ ဓမ္မတာလာခြင်းကို မသန့်ရှင်းသောအရာတစ်ခုအဖြစ် မှတ်ယူကာ အမျိုးသမီးများအား အိမ်ကနေမောင်းထုတ်ကာ နွားတင်းကုပ်နှင့် အခြားတဲစုတ်တဲပြတ်တွေမှာ သီးခြားနေထိုင်စေခဲ့သည်။ အပျိုဖော်စဝင်သည့် မိန်းကလေးငယ်များအပြင် ကလေးမွေးဖွားထားသော အမျိုးသမီးများသည်လည်း မသန့်ရှင်းပူးဟု ယူဆကာ သီးခြားခွဲပြီးနေထိုင်ရပြီး မိသားစုရဲ့ ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းတွေကိုလည်း မခံရသည့်အတွက် အသက်ရှင်အောင် မနည်းရုန်းကန်ပြီး နေထိုင်ခဲ့ရသည်။ Credit ကမၻာႀကီးသည္ နိုင္ငံေပါင္းစုံနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံတိုင္းစီမွာလည္း ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးစံသည္ မတူညီပဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတတ္ၾကသည္။ ယခုတြင္လည္း နီေပါနိုင္ငံရွိ … Read more
Zawgyi ညီမရဲ႕ပုံကိုမ်က္ႏွာဖ်က္မတင္ပါနဲ႔ညီမအမ်ိဳးသားေတြ႕ရင္သူျပန္လာမယ္ထင္ပါတယ္တဲ့အားလုံး ရွဲေပးၾကပါဦးေနာ္ ေပၚပင္စုံပရိသတ္ႀကီးေရ လူ႐ႊင္ေတာ္ မိုးစက္က အမ်ိဳးသားနဲ႕ အဆက္သြယ္ျပတ္ၿပီး စိတ္ဒုကၡေရာ လူဒုကၡေရာ ေရာက္ေနရွာတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို သြား ေရာက္လႉဒါန္းခဲ့တဲ့ သတင္းေလးကို ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္ ညီမရဲ႕ပုံကို မ်က္ႏွာဖ်က္မတင္ပါနဲ႕ ညီမ အမ်ိဳးသားေတြ႕ရက္ သူျပန္လာမယ္ထင္ပါတယ္ အခက္အခဲေတြ အရမ္းမ်ားလြန္းလို႔ ျမစ္ထဲခုန္ခ်ၿပီး အဆုံးစီရင္ဖို႔ေတာင္ ေတြးထားမိတာတဲ့ဗ်ာ…။ ထိုင္းနိုင္ငံမွာ အလုပ္ ၊ အတူတူလုပ္ၿပီး ျပန္လာတဲ့အခ်ိန္ သူ႕ဇာတိခဏျပန္ဦးမယ္ဆိုၿပီးအဆက္အသြယ္ပါျပတ္သြားခဲ့တာပါတဲ့…။ သူ႕မွာကိုယ္ဝန္က်န္တဲ့တာကိုလဲ သိမသြားပါဘူးတဲ့…။ အစကေတာ့ အဝတ္ေလွ်ာ္၊ စက္ခ်ဳပ္ၿပီး မိဘႏွစ္ပါးကို ရွာေကြၽးခဲ့တယ္…။ အခုေတာ့ ကိုယ္ဝန္က ၈ လထဲေရာက္ေနၿပီမို႔ဘာမွအဆင္မေျပေတာ့တဲ့အခါ ကြၽန္ေတာ့္ဆီကို အကူအညီလာေတာင္းခံပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္လဲပိုက္ဆံေတြခ်ည္းဘဲေပးခဲ့ခ်င္ေပမယ့္ေႂကြးမွီေတာင္းတဲ့လူေတြ ရွိခဲ့ရင္…ေနာက္ရက္ေတြစားေရးေသာက္ေရးအခက္အခဲရွိေနမွာစိုးလို႔… ဆန္တစ္အိတ္ နဲ႕ ေငြ ၃၀၀၀၀ အရင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ကဲ…ဒီပိုစ့္ကို ေကာင္မေလးရဲ႕အမ်ိဳးသားေတြ႕ရင္ အျမန္ဆုံးကြၽန္ေတာ့္ဆီဆက္သြယ္ပါ…။ … Read more
3 in 1ဆက်ဆံ ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုကို လက်မခံတဲ့ အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသားကို ဓားနဲ့ လိုက်ခုတ်မှုဖြစ်ပွားsee more..
3 in 1ဆက်ဆံ ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုကို လက်မခံတဲ့ အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသားကို ဓားနဲ့ လိုက်ခုတ်မှုဖြစ်ပွား အိမ်ထောင်ရှိအမျိုးသားကို ဇနီးနဲ့အတူ သူမကိုပါ ပေါင်းသင်းပြီး သုံးဦးအတူ လိင်ဆက်ဆံပေးဖို့တောင်းဆိုတာကို လက်မခံလို့ အမျိုသားကို တောင်းဆိုသူ ထိုင်းအမျိုးသမီးက အိမ်အထိ ဆာမူရိုင်းဓားရှည်ကိုင်ဆောင်ပြီး လိုက်လာခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ထိုင်းအင်တာနက်ဆိုရှယ်စာမျက်နှာမှာ အဆိုပါရုပ်သံဟာ ပျံ့နှံ့လာပြီး ရုပ်သံဖိုင်ထဲမှာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ အမျိုးသားရဲ့ အိမ်ရှေ့ထိရောက်လာပြီးဓားနဲ့ ခုတ်ဖို့ ကြိုးစားနေကာ ဆဲဆိုကြိမ်းမောင်းခြင်းတွေလည်း ရှိခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီအမျိုးသမီးက သုံးဦးအတူလိင်ဆက်ဆံဖို့ အတင်းအကျပ် တောင်းဆိုနေမှုကြောင့် ဘန်ကောက်ကနေ ထွက်ပြေးရတဲ့အထိ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ခြိမ်းခြောက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ ဇနီးမောင်နှံက ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ထိုင်းသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ ဖော်ပြချက်ထဲမှာ အဲ လို့ခေါ်တဲ့ အသက် ၃၈ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားဟာ … Read more
ဆန္ဒတွေပြရင်း တပ်ရင်းမှုး ကတော်ဖြစ်သွားတဲ့ အေးမြတ်သူ
မြန်မာဆန်ဆန်ဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ ရိုးရှင်းလှတဲ့ပုံရိပ်တွေကြောင့် ပရိသတ်တွေ ချစ်ခဲ့ကြတာကတော့ အေးမြတ်သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာ ယနေ့အချိန် ထိအနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်မှုတွေသိမ်းပိုက်ထားနိုင်တာပါ။ ယနေ့အချိန်ထိတိုင် သူ့ကိုလေးစား အားကျနေရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေ ပရိသတ်တွေ များစွာရှိတာပါ။ ခုနောက်ပိုင်းမှာ အနုပညာအလုပ်တွေ သိပ်မလုပ်တော့ပေမယ့် လူမှုကွန်ရက်ကနေ ပုံရိပ်လေးတွေတင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ကာလ အတွင်းကလည်း သူမရဲ့ပုံရိပ်တစ်ချို့ကြောင့်ဝေဖန်ခံနေရတာပါ။ မြန်မာဝတ်စုံလေးတွေကြောင့် ပရိသတ်အချစ်ပိုခဲ့တဲ့ သူမဟာနောက်ပိုင်း ခန္ဓာကိုယ်အလှပေါ်လွင်တဲ့ပုံရိပ်တွေကြောင့် ပရိသတ်တစ်ချို့ ဝေဖန်တာခံရတာပါ။ ခုမှာလည်း သူမရဲ့ချစ်သူနဲ့ ပုံရိပ်တွေကြောင့် ပရိသတ်ကြားမှ ာတော်တော်လှုပ်ခတ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူမနဲ့တူတူတွဲရိုက်ထားတဲ့ သူမချစ်သူဟာ စစ်တပ်ကတပ်ရင်းမှုးတစ်ယောက်လို့ ထင်ကြေးပေးနေကြပြီး ဝေ ဖန်မှုတွေ ကြုံနေခဲ့ရတာပါ။ အေးမြတ်သူကို ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေလည်း ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ အေးမြတ်သူအတွက် ဝေဖန်အကြံပြုချက်လေးတွေ ပြောပေးကြပါဦးနော်။ Credit Zawgyi ဆန္ဒတွေပြရင်း တပ်ရင်းမှုး ကတော်ဖြစ်သွားတဲ့ အေးမြတ်သူ မြန်မာဆန်ဆန်ဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ … Read more